बखतेको डिभोर्स हुदा पनि किन पुन्य गौतम बोलेनन्?:: Mero Desh
बखतेको डिभोर्स हुदा पनि किन पुन्य गौतम बोलेनन्?
Published on: १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०१:४८
काठमाण्डौं।”पुन्य गौतम यति बेला नाम हैन स”र्वाधिक चर्चा हुने एउटा ब्राण्ड बनेको छ। कमेडी च्याँप्पियन देखि सडक हुदै संसदमा समेत पुन्य र मुकुन्दे उर्फ मुकुन्द घिमिरे को चर्चा हुन्छ। पिएचडी स्कलर पुन्य विभिन्न सासामयिक विषय हुदै सामाजिक विषयय मा पनि उति’कै सक्रिय छन।
विभिन्न सभा सम्मेलन देखि ब्यक्तिको घ’रायसी मामिलामा समेत पुन्यको उपस्थिति हुने गरेको छ। बखत र प्रतिभाको डि’भोर्स हुदा पनि चुईक्क नबोले पछि शुभचिन्तकले पुन्य कता छन किन बोल्दैनन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे का छन। ति दर्शकहरु पुन्य र बखते दुबैको शुभचिन्तक हु भन्छन्।
डिभोर्स पछि पहि,लोपटक मिडि,यामा आएकी प्रतिभाले रुँदै बखतलाई यति सम्म भनिन्, (भिडियो हेर्नुस्)केही समयअघि युट्युबमा एक जोडी खुब भाइरल भएका थिए । तर यी भाइरल जोडी बखत बहादुर बिष्ट र प्रतिभा बिष्ट आजभोली त्यति देखिएका छैनन् । यी दुईको अचम्मको जोडि भएका कारण यी दुई सबैको नजरमा पर्न सफल भए ।
बखत उमेरमा २६ वर्षभएतापनी उचाईमा उनी निकै होचा छन् । उनका तुलनामा उनकी श्रीमती उमेरमा कान्छी तर बखतभन्दा ठूली छिन् । यी जोडीहरुले भागेर विवाह गरेका हुन् ।बखतलाई पहिले-पहिले सानो भनेर सबैले हे’प्ने गर्थे तर प्रतिभाले त्यस्तो केहि नसोची बखतलाई साथ
थिइन । केही समय अघि यी दुईबीच अथाह प्रेम रहेको थियो । यी जोडीले केही म्युजिक भिडियो समेत खेलेका थिए । तर अहिले बखत आफ्नी श्रीमतीले कु,ट,पि,ट गरेको भन्दै मिडियामा आएका थिए ।त्यसपछि फेरि पछिल्लो पटक प्रतिभा पनि मिडियामा आएर धेरै खुलासा गरेकी छिन । अब हेर्नुस प्रतिभाको बयान ।
यो पनि अर्को समचार पढ्नुस काठमाडौं । बाबु नभएको छोरा जन्माएकी चर्चित अभि नेत्री तथा तृणमूल कांग्रेसकी सांसद नुसरत जहाँ (nus) nusrat jahan) ले लिएको नयाँ निर्णयले सबै हैरान भएका छन् । उनले आफ्नो छोराको नाम ईशान राखेकी छिन् नुसरतले बिहीबार पार्क स्ट्रीटको एक निजी अस्पताल
मा छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । अस्पताल स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नुसरत जहाँ आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन सक्छिन् । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री तथा तृणमूल कांग्रेसकी सांसद नुसरत जहाँले आफ्नो बच्चालाई बुबाको नाम नदिने निर्णय गरेकी हुन् । उनी ‘एकल आमा’
बन्न चाहन्छिन् ।नुसरतको उक्त निर्णय लाई कोलकता मा रहेका धेरै एकल आमाहरुले स्वागत गरेका छन् । यसैबीच, बच्चाको जन्मपछि, उनको बुबाको नामको बारेमा लगातार प्रश्न उठाइएको छ । नुसरत यस बारेमा लगातार सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेकी छिन् । नुसरत पूर्वपति निखिल
जैन”संगको विवाह र सम्बन्ध विच्छेद का कारण चर्चामा” आएकी थिइन् । उनले आफूहरुको विवाह कानूनी नभए को तर्क गरेका थिए ।लामो समयदेखि उनी लिभइन–रिले शनशिपमा बस्दै आएकी थिइन् ।निखिल जैनले हालै आफु नुसरतले जन्माएको बच्चाको पिता नभएको बताएका थिए
बच्चाको जन्मपछि सामाजिक सञ्जालमा ईशानका बुबा को नामको बारेमा लगातार प्र”श्नहरु उठ्न थाले का छन् ।
नुसरत यस बारेमा लगातार सामाजिक सञ्जाल मा ट्रोल भइरहेकी छिन् । नुसरतले आफ्नो बच्चाको नाम ‘ईशान’ राखीन्, जसको अंग्रेजी हिज्जे आई बाट शुरू हुन्छ” । यो
नाम फिल्म अभिनेता यशदासगुप्ताको नामसंग मेल खान्छ प्रश्न उठिरहेको छ कि अभिनेता यश दासगुप्ता यो बच्चाको पिता हुन् ? यश दासगुप्ता गर्भावस्था को समयमा नुसरत” संग सधैं देखिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा गरे का पोस्टहरुबाट यसबारे धेरै संकेतहरु प्राप्त भएका छन् ।
नुसरत र यश केहि दिन पहिले संगै देखिएका थिए उनी हरु पार्क स्ट्रीटमा एक प्रसिद्ध बेकरीमा गएको बेला मानिसहरु ले उनीहरुलाई एकसाथ देखेका पनि हुन् यश दास गुप्ता” डेलिभरी को समयमा नुसरतको साथमा अस्पतालमा थिए । नुसरत यश दासगुप्ता संग नै अस्पताल गएको बताइन्छ
बच्चाको जन्मपछि, यश दासगुप्ताले पहिलो पटक प्रति कृया जनाउदै नुसरत र नवजात शिशु ठीक भएको जान कारी दिएका थिए । नुसरतको यस्तो किसिम को निर्णय लाई धेरैले तारिफ गरेका छन। भने केहिले आलोचना मात्र हैन ट्रोल नै बनाएका छन्।